Ukuqhekeka kweklavicle yaBantwana
Yintoni i-clavicle fracture?
Ukuqhekeka kwe-clavicle kukuqhekeka okanye ukuqhekeka kwi-clavicle yomntwana wakho (ikhola yomqala). Ukuqhekeka kwe-clavicle yinto eqhelekileyo yokuqhekeka kwethambo ebantwaneni.
Ziintoni iimpawu kunye neempawu zokuqhekeka kwe-clavicle ebantwaneni?
Intlungu kwi-clavicle okanye ngaphezulu kwegxalaba, ngakumbi ngokuhamba kwegxalaba
Ingxaki yokuhambisa igxalaba okanye ingalo
Ukudumba okanye ukugruzuka
Ubuthathaka, ukuba ndindisholo, okanye ukubetha egxalabeni nasengalweni
Isigaxa okanye ibala kwindawo eqhekekileyo
I-clavicle ekhubazekileyo, okanye i-clavicle ekhangeleka ngaphandle kwendawo
Amagxalaba ahla esiya phambili
Inkxaso yengalo ngesinye isandla ukunciphisa iintlungu
Ufunyaniswa njani ukuba uqhekeza i-clavicle?
Umboneleli wezempilo womntwana wakho uya kubuza malunga nokwenzakala komntwana kunye neempawu zakhe. Uya kuvavanya ihlombe lomntwana wakho kwaye unokucinezela ngobunono kwikhola. Umboneleli unokujonga ukuziva kunye namandla engalweni yomntwana wakho, esandleni nasemnweni. IX-reyi, okanye i-CT inokubonisa ukwaphuka. Umntwana wakho unokunikwa ulwelo olwahlukileyo ukunceda ukwaphuka kubonakale ngcono kwimifanekiso. Xelela umboneleli wezempilo ukuba umntwana wakho ukhe abe neempendulo ezichaseneyo nolwelo olwahlukileyo.
Uphathwa njani i-clavicle fracture?
Uninzi lwee-clavicles ezaphukileyo ziyaziphilisa zodwa. Kubaluleke kakhulu ukugcina ingalo yomntwana wakho ivumela i-clavicle ukuba iphilise ngokufanelekileyo. Umntwana wakho unokufuna oku kulandelayo:
uyithatha njani iXanax
Acetaminophen kunciphisa iintlungu kunye nefiva. Iyafumaneka ngaphandle komyalelo kagqirha. Buza ukuba ungamnika malini umntwana wakho nokuba uza kumnika kangaphi. Landela izikhokelo. Funda iilebheli zawo onke amanye amayeza asetyenziswa ngumntwana wakho ukuba ngaba ane-acetaminophen, okanye ubuze ugqirha womntwana wakho okanye usokhemesti. I-Acetaminophen inokubangela ukonakala kwesibindi ukuba ayithathiwanga ngokuchanekileyo.
Ii-NSAID , ezinje nge-ibuprofen, zinceda ukunciphisa ukudumba, iintlungu kunye nomkhuhlane. Eli yeza liyafumaneka okanye ngaphandle komyalelo kagqirha. Ii-NSAID zinokubangela ukuphuma kwesisu okanye iingxaki zezintso kubantu abathile. Ukuba umntwana wakho uthatha iyeza elicoca igazi, njalo buza ukuba ii-NSAID zikhuselekile kuye okanye kuye. Soloko ufunda iilebhile yamayeza kwaye ulandele umkhombandlela. Musa ukunika la mayeza kubantwana abangaphantsi kweenyanga ezintandathu ubudala ngaphandle kolwalathiso kumboneleli wezempilo womntwana wakho.
Isilingi okanye isihlangu seplangana Kuya kucetyiswa ukuba ugcine i-clavicle yomntwana wakho ingashukumi ukuze iphilise. Iya kunceda ukunciphisa iintlungu.
Ugqirha kunokufuneka ukuba ubuyisele amathambo kwindawo yawo yesiqhelo. Izikhonkwane, iipleyiti kunye nezikrufu zinokusetyenziselwa ukubamba ithambo ndawonye.
Ndingenza ntoni ukunceda ukulawula ukuqhekeka komntwana wam clavicle?
Phumla iya kunceda i-clavicle yomntwana wakho iphilise. Nciphisa umsebenzi womntwana wakho njengoko kuyalelwe. Umntwana wakho kufuneka aphumle kangangoko kwaye afumane ukulala okuninzi.
Faka umkhenkce kwi-clavicle yomntwana wakho kangangemizuzu engama-15 ukuya kwengama-20 ngeyure nganye okanye njengoko kuyalelwe. Sebenzisa ipakethe yomkhenkce, okanye ubeke umkhenkce otyunyuziweyo engxoweni yeplastiki. Gubungela ingxowa ngetawuli ngaphambi kokuba uyisebenzise kwi-clavicle. Umkhenkce unciphisa ukudumba neentlungu.
Ulungiso lwenyama unokucetyiswa emva kokuphilisa umntwana wakho. Ingcali yonyango ifundisa ukuzilolonga komntwana wakho ekuncedeni ukuphucula intshukumo kunye namandla, kunye nokunciphisa iintlungu.
Ndingalufumana nini uncedo olukhawulezileyo?
Igxalaba lomntwana wakho, ingalo, isandla, okanye iminwe ijike ibe luhlaza okwesibhakabhaka okanye mhlophe, okanye azive ebanda okanye ebandindisholo.
Intlungu yomntwana wakho iba mandundu, nasemva kokuba ethathe iyeza lentlungu.
Isilingi yomntwana wakho siziva siqinile, okanye ukwanda kokudumba.
Umntwana wakho akakwazi ukuhambisa iminwe yakhe.
Ndifanele ndibize nini ugqirha womntwana wam?
Isilingi okanye urhangqo lomntwana wakho luyaphuma okanye luyonakala.
Unemibuzo malunga nemeko yomntwana wakho okanye inkathalo.
Unelungelo lokunceda ukucwangcisa ukhathalelo lomntwana wakho. Funda ngemeko yezempilo yomntwana wakho nendlela anokuphathwa ngayo. Xoxa ngeendlela zokonyango kunye nabanikezeli benkathalelo yomntwana wakho ukuze uthathe isigqibo malunga nokhathalelo olufunela umntwana wakho. Olu lwazi lungentla luncedo kwezemfundo kuphela. Akujoliswanga njenge ngcebiso yezonyango kwiimeko ezithile okanye unyango. Thetha nogqirha wakho, umongikazi okanye usokhemesti ngaphambi kokulandela nayiphi na irejimeni yonyango ukubona ukuba ikhuselekile kwaye iyasebenza na kuwe.
© Ilungelo lokushicilela IBM Corporation 2021 Ulwazi lusetyenziselwa uMsebenzisi wokugqibela kuphela kwaye alunakuthengiswa, lusasazwe ngokutsha okanye lusetyenziselwe ezinye iinjongo zorhwebo. Yonke imifanekiso kunye nemifanekiso efakwe kwi-CareNotes® yipropathi ene-copyright ye-ADAM, Inc. okanye i-IBM Watson Health
i-antibiotics ngaphezulu kwekhawuntari
ukungakwazi ukuhlala uphaphile covid
Iipilisi ezimhlophe ezijikelezileyo ip 203
curcumin yeziphumo ebezingalindelekanga
uyifumana njani iakhawunti ye-gmail